1 Tesalônisianina 5, Malagasy Bible (DIEM) | The Bible App
1 Tesalônisianina 5
1Momba ny andro sy ny fotoana hitrangan’izany, ry havana, dia tsy ilaina ny hanoratako aminareo. 2Satria fantatrareo tsara fa ny andron’ny Tompo dia ho avy tampoka, toy ny iavian’ny mpangalatra amin’ny alina#5.2 Ampit Mt 24.43; Lk 12.39; 2Pt 3.10.. 3Amin’ny anaovan’ny olona hoe: «Miadana sy mandry feizay ny zavatra rehetra#5.3 Ampit Jer 6.14; 8.11.!», amin’iny no hamely azy tampoka ny fandringanana ka tsy ho azony andosirana mihitsy, mova tsy ny fanaintainan’ny vehivavy bevohòka mihetsi-jaza. 4Fa ianareo, ry havana, tsy mba ao amin’ny maizina, ka tsy mba hanampoka anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. 5Satria ianareo rehetra dia an’ny mazava sy an’ny andro; tsy mba an’ny alina isika na an’ny maizina. 6Koa aza mba matory tahaka ny sasany, fa aoka hiambina sy hahonon-tena. 7Fa ny alina no atorian’ny olona ary ny alina no imamoany. 8Fa satria an’ny andro isika, dia aoka hahonon-tena ka hitafy finoana sy fitiavana ho toy ny fiarovan-tratra, ary hitafy fanantenam-pamonjena ho toy ny fiarovan-doha#5.8 Is 59.17.. 9Fa tsy notendren’Andriamanitra hiharan’ny fahatezerany isika, fa mba hahazo famonjena amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika. 10Maty ho antsika i Kristy, mba hahatonga antsika hiara-miaina aminy, na mbola velona aina isika na efa maty, amin’ny andro hiaviany. 11Noho izany àry, mifampirisiha sy mifampahereza ianareo araka izay efa fanaonareo.
Hafatrafatra sy fanaovam-beloma
12Mangataka aminareo izahay, ry havana, mba hanaja izay mikely aina eo anivonareo, dia izay voatendrin’ny Tompo hitarika sy hananatra anareo. 13Fankatoavana be dia be ombàm-pitiavana no asehoy azy ireo, noho ny asa tontosainy. Mihavàna tsara ianareo samy ianareo.
14Miangavy anareo izahay, ry havana: anaro ny kamo#5.14 ny kamo: dkt hafa izay tsy mitoetra tsara, izay misarita-piainana. , ampaherezo ny katahotra, ampio ny osa, ary aoka hahari-po amin’ny olona rehetra. 15Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy ny ratsy, fa miezaha mandrakariva hifanasoa ary hanasoa ny olona rehetra.
16Mifalia mandrakariva; 17mivavaha lalandava; 18misaora an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra, fa izany no sitrak’Andriamanitra hataonareo tafaray amin’i Kristy Jesoa.
19Aza vonoina ny asan’ny Fanahy Masina; 20aza atao tsinontsinona ny teny ataon’ireo mpilaza hafatra avy amin’Andriamanitra; 21diniho ny zavatra rehetra, ka tano izay tsara; 22halaviro daholo ny zava-dratsy isan-karazany.
23Ilay Andriamanitra loharanon’ny fiadanana anie hahatonga anareo ho voatokana tanteraka ho Azy; ka harovany avokoa anie ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba tsy hanan-tsiny amin’ny andro hiavian’i Jesoa Kristy Tompontsika! 24Mitana ny toky nomeny Andriamanitra Izay miantso anareo, ka hoefainy izany.
25Ry havana, mivavaha koa ho anay.
26Ataovy veloma amin’ny fanoroham-pihavanana daholo ny havana rehetra iray finoana.
27Iangaviako indrindra amin’ny anaran’ny Tompo ianareo: mba vakio amin’ny havana rehetra iray finoana ity taratasy ity.
28Homba anareo anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompontsika!
Explore 1 Tesalônisianina 5 by Verse
1 Tesalônisianina 5:1
1 Tesalônisianina 5:2
1 Tesalônisianina 5:3
1 Tesalônisianina 5:4
1 Tesalônisianina 5:5
1 Tesalônisianina 5:6
1 Tesalônisianina 5:7
1 Tesalônisianina 5:8
1 Tesalônisianina 5:9
1 Tesalônisianina 5:10
1 Tesalônisianina 5:11
1 Tesalônisianina 5:12
1 Tesalônisianina 5:13
1 Tesalônisianina 5:14
1 Tesalônisianina 5:15
1 Tesalônisianina 5:16
1 Tesalônisianina 5:17
1 Tesalônisianina 5:18
1 Tesalônisianina 5:19
1 Tesalônisianina 5:20
1 Tesalônisianina 5:21
1 Tesalônisianina 5:22
1 Tesalônisianina 5:23
1 Tesalônisianina 5:24
1 Tesalônisianina 5:25
1 Tesalônisianina 5:26
1 Tesalônisianina 5:27
1 Tesalônisianina 5:28